राजनीति – Page9– .:: Welcome to Saurahaonline.com
नेकपामा तीन गुटको निरन्तरता १६ पुष २०७५, सोमबार ०८:१५
काठमाडौँ,१६ पुस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक सकिए पनि त्यसभित्र तीन गुटको निरन्तरता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ..
‘व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण काङ्ग्रेस कमजोर’ १५ पुष २०७५, आईतवार १४:५५
रुपन्देही, १५ पुस । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले सरकारका कामप्रति जनता निराश भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खाँणले संविधान र..
प्रवक्ता प्रकाण्डलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विप्लवले दिए यस्तो चेतावनी (विज्ञप्ती सहित)
काठमाडौँ, १५ पुष । पार्टीका प्रवक्ता र पीबीएमका नाममा अदालतले सफाइ दिइसकेको मुद्दा पुनः उल्ट्याइएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि नै आफ्नै न्यायलयले खारेज गरिसकेको मुद्धालाई ब्युँताएर ओली..
नेकपामा ओली भन्दा प्रचण्ड बलियो
काठमाडौं,१५ पुस । नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘हावी’ भएका छन् । बैठक पहिलो दिनदेखि समापनसम्मै दाहाल बलियो देखिए भने अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत भए। पार्टी एकताको दिन जेठ ३..
छिट्टै स्थानीय सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछ : प्रचण्ड १४ पुष २०७५, शनिबार ०८:५५
बनेपा, १४ पुस । नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आइसकेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिका–२स्थित खाँडादेवी माध्यमिक प्राविधिक धार बाली..
काठमाडौं,१४ पुष । । विवाद र आलोचना भएपछि नेकपाको स्थायी समिति बैठक १४ दिन लम्बियो । पार्टी अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेताहरूले खुलेर आलोचना गरे । ओलीले पार्टी र सरकारमा गल्ती गरेको औँल्याउँदै आत्मालोचना गर्नुपर्ने..
नेपाली कांग्रेसमा पौडेल र सिटौला समूहले गरे ‘अर्ली’ महाधिवेशनको माग १३ पुष २०७५, शुक्रबार ०८:३२
काठमाडौं,१३ पुष । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले ‘अर्ली’ महाधिवेशनको माग गरेका छन् । पौडेलले पार्टी महासमिति बैठकमा ४ पुसमा कार्यतालिकासहितको अर्ली महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सिटौला समूहले..
आन्तरिक विवाद बढ्यो विवेकशील साझा पार्टीमा
काठमाडौँ,१३ पुस । विवेकशील साझा पार्टीमा आन्तरिक विवाद बढेको छ । पार्टी नेतृत्वबाट असन्तुष्ट अधिवक्ता ओम अर्यालले राजीनामा दिएका छन् । नेताहरू डा। सरोज धिताल, डा। दिनेश प्रसाई, रेशु अर्यालले पनि यसअघि नै पार्टी छोडिसकेका छन् । अहिलेकै शैलीमा..
पार्टी देखि संसद सम्म सहमति खोज्दै प्रचण्ड ! १२ पुष २०७५, बिहीबार २०:२८
काठमाडौं पुस १२ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीति बिषयमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने गरेका छन् । बुधवार बिहान पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक र अपराह्न संसद बैठकमा उनले सम्बोधन..
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक,आफ्नै लगानीमा ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने
काठमाडौं,१२ पुष । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। गत शुक्रबार तथा सोमबार बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा..